विश्वभर मंकीपक्सका संक्रमित बढिरहेका बेला फ्रान्समा मंकीपक्सका ५१ जना संक्रमित भेटिएका छन् । युरोपेली देश फ्रान्समा मंकीपक्सको पहिलो संक्रमण मे महिनामा देखिएको थियो । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका अनुसार विश्वभर मंकीपक्स संक्रमणका ७०० केस देखिएका छन् । फ्रान्समा संक्रमितमध्ये सबै जना पुरुष छन् । उनीहरु २२ देखि ६३ …
June 2, 2022 अन्तरास्ट्रिय 0
लन्डन — लियोनल मेसीको उत्कृष्ट प्रदर्शनको मद्दतले कोपा अमेरिका विजेता अर्जेन्टिनाले युरोपेली च्याम्पियन इटालीलाई वेम्बलीमा बुधबार राति ३–० ले पराजित गर्दै फाइनलमा २०२२ जितेको छ ।अतुलनीय मेसीबाट प्रभावित अर्जेन्टिनाले पहिलो हाफमा दुई गोल गरेको थियो । यी गोल लउटारो मार्टिनेज र एन्जेडल डि मारियाको नाममा रहे । पउलो डेबालाले अर्जेन्टिनाका …
May 17, 2022 अन्तरास्ट्रिय 0
एजेन्सी । पन्जाब किङ्सलाई १७ रनले हराउँदै इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी-२० क्रिकेट प्रतियोगितामा दिल्ली क्यापिटल्स चौथो स्थानमा इक्लिएको छ । सोमबार राति दिल्लीले दिएको १६० रनको लक्ष्य पछ्याएको पन्जाबले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १४२ रनमा समेटियो । पन्जाबका लागि जितेश शर्माले सर्वाधिक ४४ रन बनाए । दिल्लीका शार्दुल …
March 30, 2022 अन्तरास्ट्रिय 0
वासिङटन । अमेरिकालगायत विश्वका धेरै स्थानमा गत साता थुप्रै व्यक्तिले आकासमा रहस्यमय प्रकाशपुन्ज देखेको दाबी गरेका छन् । थुप्रै मान्छेले ‘रातो चम्किलो प्रकाश’ टेक्सासको ह्युस्टनमा पनि देखेको बताएका छन् । केहीले यस अनौठो प्रकाशको रहस्का कारण अर्कै ग्रहको प्राणीको प्रसंग पनि आउनसक्ने तर वास्तवमा यो कुनै असाधारण चिज हुने नसक्ने …
March 5, 2022 अन्तरास्ट्रिय 0
लगातार आक्रमण गरिरहेको रुसले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्की देश छाडेर भागेको बताएको छ । शुक्रबार साँझ जेलेन्स्की बंकरबाट भागेर पोल्याण्ड पुगेको दाबी रुशले गरेको छ । शुक्रवार साँझ आएको एक समाचार अनुसार युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्की राजधानी किभको बंकरबाट निस्किएर पोल्याण्ड भागेका छन्। यो दाबी रूसी सञ्चारमाध्यम स्पुतनिकले गरेको हो। …
February 20, 2022 अन्तरास्ट्रिय 0
लिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् । उनी हरेक दिन आफ्ना फ्यानसँग आफ्ना तस्विर र भिडियो शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । जसलाई उनका फ्यानहरुले पनि निकै रुचाएका छन् । यसैबीच, हालै उनले एक पोस्ट शेयर गरेकी छिन् । जसले मानिसलाई अचम्ममा पारेको छ । पोष्टमा शिल्पाको पाल्तु कुकुर …
३८ वर्षिया यि महिला जसले संगै बसिदिएको, कुरा सुनिदिएको र संगै खाना खाईदिए बापत मासिक तलब लिने गर्दछन्
February 19, 2022 अन्तरास्ट्रिय 0
जापान । कल्पना गर्नुस् कि,तपाईले कसैसंग बसेर उसको कुरा सुनिदिए वापत तथा संगै खाना खाईदिए वापत तलव पाउनु हुन्छ । झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ तर जापानका ३८ वर्षिय सोजी मोरीमोतो ३८ यस्तै गज्जबको जागिर गर्छन् । मोरीमोतोको पेशाको नाम नै ‘केही काम नगर्ने मान्छेलाई भाडामा लिनु’ रहेको छ । …
सुहा’गरात कै भोलि’पल्ट दुलहीले डि’ भोर्स गरिन् : कारण थाहा पाउँदा जो कोही चकित
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालमा हरेक दिन विवाहसँग सम्बन्धित धेरै भिडियो भाइरल भइरहेका हुन्छन् । आज हामी तपाईलाई यस्तै एउटा विवाहबारे बताउन गइरहेका छौँ । सत्य थाहा पाउँदा तपाई पनि छक्क पर्नुहुनेछ । वास्तवमा विवाहको यो अनौठो प्रकरण बेलायतको हो । त्यहाँ दुलहीले विवाहको एक दिनपछि नै सम्बन्धविच्छेद गरेकी …
इरानी युवती किन असाध्यै ‘सुन्दर र कामुक’ हुन्छन ? यस्तो छ ८ रहस्य !
February 18, 2022 अन्तरास्ट्रिय 0
आकर्षक को हुन् ? यसमा सबैको मत मिल्छ भन्ने छैन । भूगोल र समुदाय अनुसार सुन्दरताको मापन पनि भिन्न भिन्नै हुनसक्छ । कतै कालो छाला मन पराइन्छ भने, कतै गोरो । कतै पातलो ओंठलाई आकर्षक मानिन्छ, त कतै मोटो ओंठलाई । कसैले सलक्क केस रुचाउँछन् भने, कसैले कर्ली । झट्ट …
February 14, 2022 अन्तरास्ट्रिय 0
उत्तर कोरियाका तत्कालिन तानाशाह किम जोङ इलको जन्म दिनको पूर्वसन्ध्यामा उनको नाममा राखिएको एउटा फूल नफुलेको भन्दै दुई जना मालीलाई सजाय दिइएको छ । किम जोङ इलको नाममा राखिएको रातो फूल किमजोङइला नफक्रिएको भन्दै उनीहरुलाई ६ महिना श्रम शिविरमा पठाइएको हो । उत्तर कोरियाले हरेक १६ फेब्रुवरीमा इलको जन्म दिन …